Presentation and Public Speaking Skill • Brand You Academy
1. Introduction to Presentation and Public Speaking skills
3. How to control your Nervousness
4.3V’s for Effective Communication
6. Powerpoint Presentation – 1
7. Powerpoint Presentation –2(10 Common Mistakes in preparing slides)
8. PowerPoint Presentation-3( 10 Common mistakes ofaPresenter)
9.7Powers of Public Speaking
10. Preparation, Delivery & Evaluation – 1
11. Preparation, Delivery & Evaluation – 2
12. Preparation, Delivery & Evaluation – 3
13.3Essentials for your Next Step
Presentation မလုပ်ရတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုတာ မရှိသလောက်ပါပဲ။ Powerpoint မသုံးတောင်မှ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ တင်ပြပြောဆိုမှုတွေ လုပ်နေကြရတယ်။ နောက်ဆုံး အလုပ်လျှောက်လို့ အင်တာဗျူး ဖြေတယ်ဆိုတာတောင် တစ်နည်းအားဖြင့် ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ် Presentation လုပ်နေရတာပါပဲ။
လူရှေ့ထွက် စကားပြောရတယ် ဆိုတာလည်း မကြာခဏဆိုသလို လုပ်ရတယ်။ အထူးသဖြင့် စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ခေါင်းဆောင်မှုရာထူးတွေ ယူထားပြီဆိုရင် ဒါကလည်း မဖြစ်မနေ လိုအပ်လာတဲ့ စွမ်းရည်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီသင်ခန်းစာမှာ အပိုင်း .. ပိုင်း ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး အင်တာဗျူး ဖြေတာ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မိတ်ဆက်တာကနေ Powerpoint presentation တစ်ခုကို ဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲ၊ လူရှေ့ထွက် စကားပြောရတော့မယ်ဆို လုပ်ဆောင်ရမဲ့ အဆင့်ဆင့်ထိ အသေးစိတ် ပြောပြထားပါတယ်။
ဒီသင်တန်းကို လေ့လာပြီးရင် Presentation နဲ့ Public speaking တွေ စနစ်တကျနဲ့ ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ဖို့ ဘာတွေ လိုအပ်မယ်ဆိုတာ သိသွားမယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို သတိထားမိသွားမယ်။ အဲဒါတွေကို စနစ်တကျ ပြန်လည်အသုံးချနိုင်မယ်ဆို အလုပ်ခွင်မှာ ပိုပြီး အဆင်ပြေ၊ အောင်မြင်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အလုပ်ခွင်ဝင်တော့မဲ့ လူငယ်တွေ၊ အလုပ်မှာ Presentation & Public speaking skill ပိုမို တိုးတက်ချင်သူတွေ၊ Presentation ကောင်းကောင်း မလုပ်တတ်လို့ အလုပ်မှာ ထင်သလောက် မတိုးတက်ဘူး ဖြစ်နေသူတွေ၊ မန်နေဂျာတွေ၊ လူရှေ့ထွက် စကားပြောရတဲ့ အလုပ်ကို မကြာခဏ လုပ်ရသူတွေ၊ အဟောအပြော ကောင်းချင်သူတွေ မဖြစ်မနေ တက်သင့်တဲ့ သင်တန်းဖြစ်ပါတယ်။
1. Introduction to Presentation & Public Speaking
7. PowerPoint Presentation –2( 10 Common Mistakes in preparing slides)